Kooxda A.S. Roma oo diyaar u ah inay la soo wareegto Weeraryahan ka tirsan Chelsea – Gool FM
Kooxda A.S. Roma oo diyaar u ah inay la soo wareegto Weeraryahan ka tirsan Chelsea
(Rome) 30 Abril 2020. Kooxda Roma ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Chelsea ee Pedro marka qandaraaskiisa garoonka Stamford Bridge uu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan.
32-sano jirkaan ayaa horey u xaqiijiyay inuu ka tagi doono kooxda Blues dhammaadka qandaraaskiisa haatan, kaasoo lagu wado inuu dhacayo 30-ka bisha June sida wararka ay sheegayaan.
Pedro ayaa calaamad u ah inuu doonayo inuu ciyaaro ilaa dhammaadka xilli ciyaareedka dhacdo la filayo inay dheereyso taariikhdaas sababtoo ah cudurka faafa ee coronavirus, laakiin mustaqbalkiisa intaas kaddib lama hubo.
Wargeyska Corriere dello Sport ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa sheegaya in Roma ay xiiseyneyso inay la soo wareegto ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain, iyagoo ku guuldareystay dalab amaah ah bishii Janaayo.
Maamulaha Paulo Fonseca ayaa loo haystaa inuu taageere weyn u yahay Pedro wuxuuna u arkaa inuu yahay ikhtiyaarka ugu fiican ee ku wareejinta lacag la’aanta ah, gaar ahaan saamaynta dhaqaalaha ee Coronavirus.
Roma ayaa ku rajo weyn inay Pedro labo xilli ciyaareed uga hartay heerka ugu sarreeya, waxayna warbixintu sheegaysaa inay horay u siinayeen qandaraas ku kacaya 2.6 milyan oo gini sanadkii.
Kooxda ka dhisan Serie A ayaa sidoo kale damacsan inay heshiis joogto ah ka garto daafaca Man United ee Chris Smalling iyo garabka Arsenal Henrikh Mkhitaryan oo labadoodaba ay haatan amaah ku jooga Stadio Olimpico.
Xiddiga Juventus ee Paulo Dybala oo qarka u saaran inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo Kooxdiisa
Maamulka Premier League oo lagu eedeeyey inaysan wax dan ah ka lahayn nolosha ciyaartoyda kaddib markii…